Turkiga oo Xusay Sanadguuradi Koowaad ee Afganbigi Fashilmay - Worldnews.com
Turkiga oo Xusay Sanadguuradi Koowaad ee Afganbigi Fashilmay
Dowlada iyo Shacabka Turkiga ayaa xalay xusay sanadguuradi koowaad ee kasoo wareegatay afganbigi dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay 15-ki July ee sanadki 2016-ki. ...
ANKARA, Turkey- Hal Sano ayaa ka soo wareegatay markii uu fashilmay Afgembi ciidamada Militariga dalka Turkiga ay ku doonaya inuu jagada kaga xayuubiyo Madaxweynaha dalka...
Mareykanka Oo Xusay Maalinta Xorriyadda
Shacabka Mareykanka ayaa shalay iyo xalay si weyn ugu dabaaldagay xuska maalinta xorriyada ee 4-ta July. ......
Baarlamaanka Midawga Yurub ayaa galinka dambe ee maanta cod u qaadaya in la baajiyo wadahadaladii Turkiga ay la lahaayeen ee ku saabsanaa sidii uu ugu biiri lahaa Midawga...
Dowladda Turkiga ayaa shaqada ka joojisay 13 kun oo boolis oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin wadaadka fadhigiisu yahay Mareykanka, Fetxullah Gulen. In kabadan 2500 oo ka mid ah askartaasi waa taliyayaal, sida dowladdu...
Dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha Turkiga ka mamnuucday inuu dalkaas soo galo, si uu uga qeyb-galo dibadbax lagu xusayo sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgambigii dhicisoobay ee dalkaas. ......
Turkiga oo xusaya sanad guurada isku-daygii afgembi
Dalka Turkiga waxaa maanta ka dhacaya munaasabado dhowr ah oo lagu xusayo sanad guurada koobaad ee kasoo wareegtay isku-daygii afgembi ee ka dhanka ahaa madaxweyne Rajab Tayid Erdogan. 15-ka July ayaa waddankaasi looga asteeyay maalin fasax qaran ah, ayadoo la xusayo dhacdo uu madaxweyne Erdogan ku tilmaamay mid bedeshay taariikhda Turkiga. Madaxweynaha ayaa shir gudoomin doona...
Madaxwaynaha Erdogan oo ku dhawaaqay doorasho waqtigeedii laga soo hormariyay
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaqay doorasho madaxweyne iyo Barlamaan oo waqtigoodii laga soo hormariyay. Doorashada Turkiga ayaa imika la qaban doonaa 24 bisha June ee sanadkan. Madaxwayne Erdogan ayaa sheegay in dalka si deg deg ah uu ugu baahan yahay madaxweyne awood buuxda leh oo wax ka qabta dhibaatooyiinka haysta dalka. Haddii doorasho la...